တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာန၊ အာရှရေးရာအထူးကိုယ်စားလှယ် H.E. Mr. Sun Guoxiang အား လက်ခံတွေ့ဆုံ » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
မေ ၂၂၊ ၂၀၁၈
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြား ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အာရှရေးရာအထူးကိုယ်စားလှယ် H.E. Mr. Sun Guoxiang အား ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သန်းထွန်းဦးနှင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများတက်ရောက်ကြပြီး တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အာရှရေးရာအထူးကိုယ်စားလှယ်နှင့် အတူ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်နိုင်ငံသံရုံးမှ ကောင်စစ်ဝန်ချုပ် Mrs. Li Xiaoyan၊ စစ်သံမှူးနှင့်တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် မေလ ၁၂ ရက်နေ့က မူဆယ်မြို့နယ်အတွင်းရှိ လုံခြုံရေးစခန်းများနှင့် မြို့တွင်းရှိနေအိမ် များအား KIA ၊ TNLA ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကအကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့်ဖြစ်စဉ်များ၊ ယင်းအကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက် မှုအပေါ် တရုတ်နိုင်ငံကပြင်းထန်စွာပြစ်တင်ရှုတ်ချပြီး အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် စိုးရိမ်ထိတ်လန့်၍ တရုတ်နိုင်ငံဘက်သို့တိမ်းရှောင်ခဲ့သည့် အရပ်သားများအား တရုတ်နိုင်ငံကကောင်းမွန်စွာစောင့် ရှောက်ပေး ထားသည့်အခြေအနေများ၊ နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက် အလေးထားဆောင်ရွက် လျက်ရှိသည့်အခြေအနေများ၊ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန်အတွက် အစိုးရနှင့်တပ်မတော်မှ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည့် အခြေအနေများနှင့် တရုတ်နိုင်ငံမှပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်အခြေအနေများအား ရင်းနှီး ပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဌာန၊ အာရှရေးရာအထူးကိုယ်စားလှယ်တို့သည် တက်ရောက်လာကြသူများနှင့်အတူ အမှတ်တရစုပေါင်း ဓာတ် ပုံရိုက်ခဲ့ကြသည်။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ၊ နိုငျငံခွားရေး ၀နျကွီးဌာန၊ အာရှရေးရာအထူးကိုယျစားလှယျ H.E. Mr. Sun Guoxiang အား လကျခံတှဆေုံ့
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ တရုတျပွညျသူ့ သမ်မတနိုငျငံ၊ နိုငျငံခွား ရေးဝနျကွီးဌာန၊ အာရှရေးရာအထူးကိုယျစားလှယျ H.E. Mr. Sun Guoxiang အား ယနနေံ့နကျပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ ဘုရငျ့နောငျရိပျသာဧညျ့ခနျးမဆောငျ၌ လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
အဆိုပါတှဆေုံ့ပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ ဒုတိယ ဗိုလျခြုပျကွီး သနျးထှနျးဦးနှငျ့ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြားတကျရောကျကွပွီး တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ၊ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန၊ အာရှရေးရာအထူးကိုယျစားလှယျနှငျ့ အတူ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာတရုတျနိုငျငံသံရုံးမှ ကောငျစဈဝနျခြုပျ Mrs. Li Xiaoyan၊ စဈသံမှူးနှငျ့တာဝနျရှိသူမြား တကျရောကျကွသညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ရာတှငျ မလေ ၁၂ ရကျနကေ့ မူဆယျမွို့နယျအတှငျးရှိ လုံခွုံရေးစခနျးမြားနှငျ့ မွို့တှငျးရှိနအေိမျ မြားအား KIA ၊ TNLA ပူးပေါငျးအဖှဲ့ကအကွမျးဖကျ တိုကျခိုကျခဲ့သညျ့ဖွဈစဉျမြား၊ ယငျးအကွမျးဖကျ တိုကျခိုကျ မှုအပျေါ တရုတျနိုငျငံကပွငျးထနျစှာပွဈတငျရှုတျခပြွီး အကွမျးဖကျတိုကျခိုကျမှုကွောငျ့ စိုးရိမျထိတျလနျ့၍ တရုတျနိုငျငံဘကျသို့တိမျးရှောငျခဲ့သညျ့ အရပျသားမြားအား တရုတျနိုငျငံကကောငျးမှနျစှာစောငျ့ ရှောကျပေး ထားသညျ့အခွအေနမြေား၊ နှဈနိုငျငံနယျစပျဒသေတညျငွိမျအေးခမျြးရေးအတှကျ အလေးထားဆောငျရှကျ လကျြရှိသညျ့အခွအေနမြေား၊ ပွညျတှငျးငွိမျးခမျြးရေးရရှိရနျအတှကျ အစိုးရနှငျ့တပျမတျောမှ ဆောငျရှကျလကျြ ရှိသညျ့ အခွအေနမြေားနှငျ့ တရုတျနိုငျငံမှပါဝငျကူညီဆောငျရှကျလကျြရှိသညျ့အခွအေနမြေားအား ရငျးနှီး ပှငျ့လငျးစှာ အမွငျခငျြးဖလှယျဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။
တှဆေုံ့ပှဲအပွီးတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ၊ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး ဌာန၊ အာရှရေးရာအထူးကိုယျစားလှယျတို့သညျ တကျရောကျလာကွသူမြားနှငျ့အတူ အမှတျတရစုပေါငျး ဓာတျ ပုံရိုကျခဲ့ကွသညျ။